Kitra: ho avy alohan’ny alakamisy ireo Barea «expatriés» | NewsMada
Kitra: ho avy alohan’ny alakamisy ireo Barea «expatriés»
Nanapa-kevitra i Nicolas Dupuis mpanazatra ny Barea de Madagascar fa hatao izay hahatongavan’ireo mpilalao mpila ravinahitra “expatriés” mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy, aloha hahafahana manoman-tena am-pitoniana.
Ho tonga eto Madagasikara, alohan’ny alakamisy ho avy izao, ireo mpilalao mpila ravinahitra rehetra, avy any Frantsa sy avy any La Réunion ary avy any Thaillande, mandrafitra ny Barea de Madagascar, amin’ny fikatrohana amin’i Soudan, ny alahady 18 novambra ho avy izao. Fihaonana, hotanterahina eny amin’ny kianja Vontovorona, tafiditra amin’ny lalao miverina, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2019”.
“Na efa tafita any amin’ny “Can 2019” aza ny Barea, mila atao anaty fahatoniana sy matotra ny fanomanana. Tokony hotazonina ny fahaiza-miaraka efa misy eo amin’ireo mpilalao”, hoy i Nicolas Dupuis, efa tonga mialoha. Araka izany, nisy ireo efa niainga, omaly alatsinainy. Anisan’ireny i Mamy Gervais, i Ibrahima Dabo, i Caloin, i Jeremy Morel, ilay vodilaharana Lyonnais, mpilalao vaovao nantsoin’ny mpanazatra. Marihina fa efa tonga eto an-tanindrazana mialoha ihany koa i Bolida sy i Faneva Ima, kapitenin’ny Barea. Raha tsy misy ny fiovana, hiatrika avy hatrany ny fanazarantena eny amin’ny kianja Pedro, eny Andralanitra, anio talata, ireo mpilalao “expatriés” ireo sy ireo mpilalao avy eto an-toerana. Ny sasany kosa, ho tonga rahampitso alarobia.
Araka ny fantatra, ho avy eto Madagasikara avokoa ireo mpilalao avy any ivelany, niatrika ny lalao tamin’i Ginea Ekoatorialy. Misy amin-dry zalahy ny nianto-tena hiatrehana izany fihaonana izany satria 11 ihany ireo azon’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra niantohana.
Mahakasika ireo mpilalao avy eto an-toerana, nomarihin’i Nicolas Dupuis fa 18 ihany no azo soratana ao anaty taratasin-dalao, araka izany, tsy maintsy hisy ireo mpilalao tsy ho tafiditra fa hijanona ho mpijery, na efa nantsoina handrafitra ny Barea de Madagascar aza.